इन्जिनहरू खोज्ने प्रायः सोधिने प्रश्नहरू के हो?
खोज इञ्जिन प्रश्नहरू वा प्रश्नहरू शब्दहरू वा वाक्यांशहरू हुन् जुन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताहरूले खोजी बक्समा टाइप गर्दछन् जुन उनीहरूको क्वेरी खोजी परिणामहरूसँग सम्बन्धित छ।. खोजी प्रश्नहरू तीन मुख्य श्रेणीहरू - नेभिगेसन, सूचना र लेनदेनमा विभाजन गर्न सकिन्छ. प्रश्नहरूको विविधताले हामीलाई हाम्रो सम्भावित ग्राहकहरूलाई व्यवहार र तिनीहरूको उद्देश्य खोज्न सक्षम बनाउँछ. हामीलाई यी प्रकारको इन्जिन प्रश्नहरूको नजिकको नजिक छ.
खोज इन्जिन प्रश्नहरू
क्वेरीको प्रकारमा जब प्रयोगकर्तालाई थाहा छ कि किस प्रकारको स्रोत उसले पत्ता लगाउन चाहन्छ. उहाँ भर्खरै एउटा विशेष वेबसाइट URL मा खोज बक्समा राख्नुहुन्छ र सान्दर्भिक परिणाम पाउँदछ. सही नेभिगेसन प्रश्नहरू स्पष्ट उद्देश्य छ र यदि तपाईंको साइट प्रयोगकर्ताको मनमा होइन, तपाईंको साइट अननोट हुनेछैन.
यो प्रकारको क्वेरीसँग यो रणनीति निर्माण गर्न जटिल हुन सक्छ. यद्यपि, यदि तपाइँ आफ्नो ब्रान्ड पहिचान सुधार गर्न फोकस गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ आफ्नो अवसर दोहोर्याउनुहुन्छ. नेभिगेसन क्वेरीमा आउनुहुँदा पहिलो Google SERP पृष्ठमा देखा पर्ने परिणामहरूको औसत संख्या सात हो. Google ले यो कदम उठाएको छ किनकि यो प्रायः परिणामहरुमा प्रयोगकर्ताहरु को शीर्ष मा एक परिणाम मा सात भन्दा बढी परिणामहरू देखाउन बेकार देखिन्छ जस्तो. यद्यपि, केहि क्वेरीहरू नेभिगेसन देखा पर्न सक्छ जुन यस प्रकारको होइन. उदाहरणका लागि, सबै प्रयोगकर्ताहरू "Instagram" क्वेरी खोज्न यो मल्टीमीडिया अनुप्रयोग फेला पार्न आवश्यक छैन. केही मध्ये केहि केहि सम्बन्धित लेखहरू वा सूचनाहरू केही इन्स्टाग्राम सेटिङहरू वा अपडेटहरू पढ्न मनपर्छ. यही कारणले तपाइँलाई निश्चित हुनुपर्दछ कि तपाइँसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक क्वेरी छ जुन भुक्तानी र जैविक परिणाम दुवैमा देखिन्छ.
एक सूचनात्मक क्वेरी हो जब एक प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रश्नको उत्तर खोज्न वा केही समस्या समाधान गर्न चाहन्छ. यसले उनको कुन प्रकारको साइट सामना गर्नेछ भन्ने कुरा गर्दैनन्. त्यहाँ एक मात्र आवश्यकता हो कि यो वेब स्रोत यसको प्रश्नको लागि अधिकतम रूपमा प्रासंगिक हुनेछ. एक सूचना क्वेरी व्यापक प्रसार र सामान्यतया औसत प्रयोगकर्ताहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ. खोज इन्जिन अनुकूलन को प्राथमिक उद्देश्य प्रयोगकर्ताहरु लाई को बारे मा जानकारी को प्रश्नहरु संग केहि गुणस्तर सामाग्री खोज्दै को आकर्षित गर्न को लागी छ. यदि तपाईसँग अनन्य र संलग्न एसईओ सामग्री हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसकारण सम्भवतः तपाईंको वेबसाइटले धेरै गुणस्तर ट्राफिक प्राप्त गर्नेछ जुन बिक्रीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।. यो पहिलो मामला मा पहिलो सर्प पद को रूप मा जानकारी प्रश्नहरु देखि केहि लाभ प्राप्त गर्न गाह्रो छ, सामान्यतया Google ज्ञान ग्राफ उत्तर र विकिपीडिया लेख. तथापि, धेरै प्रयोगकर्ताहरू विषयको बारेमा गहिरो जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छन्. तपाइँको क्लिक-मार्फत-दर र रूपान्तरण बढाउनको लागि यो तपाइँको मौका हो. तपाईंको वेब स्रोतमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न, तपाईले ब्लग पोष्टहरू गुणस्तरको जानकारी र सुझावहरूको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. साथै, यो विस्तृत चरण-दर-निर्देश गाइड र वर्णनात्मक भिडियोहरू डिजाइन गर्न स्मार्ट छ.
एक ट्रांजेक्शनल क्वेरी हो जब प्रयोगकर्ता खरीद गर्न चाहान्छ. यसले "केहि चीज गर्न" वा "केही आदेश गर्न" जस्तो लाग्छ. "यसबाहेक, ट्रांजेक्शनल क्वेरीहरूले सही ब्रान्ड नामहरू जस्तै" एप्पल उपकरणहरू "वा" सैमसंग स्मार्टफोन्सहरू "समावेश गर्दछ. "धेरै स्थानीय खोजीहरू जस्तै" शिकागोमा नजिकैको एशियाई रेस्टुरेन्ट "पनि ट्रांजिनेल हुन्. एक लेनदेन क्वेरी सबसे लाभदायक क्वेरीिंग क्वेरी हो जो अनलाइन व्यापारीहरु लाई अनलाइन को रूप मा जुटने को लागि सक्षम बनािन्छ. उच्चतम ROI प्राप्त गर्न, वेबसाइट मालिकहरू इन्जिन अनुकूलन र वेतन प्रति क्लिक विज्ञापन खोजी गर्न संदर्भित गर्दछ Source .